Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguZani
IPelican House yindawo ephangaleleyo, enefenitshala ekhululekileyo yokuzityisa yabantu aba-6 eGrotto Bay, kwaye ikwi-340 m ukusuka elunxwemeni.
Indlu enemigangatho emininzi inamagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi, kunye negumbi lokuphumla. Igumbi lokulala elikumgangatho wokuqala linebhedi ephindwe kabini, kwaye linegumbi lokuhlambela leen-suite elineshawa, ibhafu, kunye nendlu yangasese. Igumbi lokulala lesibini linebhedi ephindwe kabini, kwaye igumbi lesithathu lifakwe iibhedi ezi-2 ezingatshatanga. Amagumbi okulala ama-2 abelana ngokusetyenziswa kwegumbi lokuhlambela elineshawa, kunye nebhafu. Ukuze kube lula, iitawuli zelinen kunye neebhafu zinikezelwa.
Ikhitshi elivulekileyo linesitovu kunye ne-oveni, i-microwave, ifriji, kunye nezixhobo zokwenza iti kunye nekofu.
Iindwendwe zinokuphumla kwigumbi lokuphumla eline-TV, kwaye livuleleke kwisituphu esinendawo eyakhelweyo yokuqhotsa inyama kwaye ijonge kwidama lokuqubha. Ukusuka kwidesika, iindwendwe zinombono webhayi kunye neNtaba yeTafile kumgama.
Iindwendwe zingaphonononga ukubethwa ngumoya kunye nolwandle lwasendle okanye zityelele iGrotto Bay Coastal ekufuphi kunye neNature Reserve eyinxalenye yeCape West Coast Biosphere Reserve, kwaye ilikhaya kwiintlobo ngeentlobo zefynbos kunye nezilwanyana zeentaka kwaye zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhamba nokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Zani